विवाहपछि महिलालाई हुन्छ यी ५ कुराको पछुतो, बनाउँछ असाध्यै दुखीत ! – Khabaarpati
December 15, 2020 December 15, 2020 Khabar PatiLeaveaComment on विवाहपछि महिलालाई हुन्छ यी ५ कुराको पछुतो, बनाउँछ असाध्यै दुखीत !
यसमा धेरै जसो महिला यस्ता हुन्छन्, जसले पछि गएर आफूले गरेको फैसलामा पछुतो मान्ने गर्दछन्। कुनै समय त उनीहरुलाई विवाह गरेमै पछुतो हुने गर्दछ। आउनुहोस् जानौँ विवाहपछि प्राय महिलालाई कुरा कुरामा पछुतो हुने गर्दछ।,,,भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला,,,
विवाहपछि महिलाले पतिसँग सँगै परिवारलाई पनि समय दिनु पर्ने हुन्छ। उनीहरुमाथि यति धेरै जिम्मेवारी आउने गर्दछ की उनीहरु आफूलाई समय दिन पाउँदैनन्। जसबाट दिक्क भएर उनीहरुमा विवाह गरेकोमा कहिलेकाही पछुतो मान्ने गर्दछन्।पर्सनल स्पेन
विवाह गर्ने वित्तिकै युवतीमा बच्चा जन्माउने दवाब आउन सुरु हुन्छ। अरु यसका लागि युवती तयार नहोस्, तर कुनै न कुनै बहानामा उसले यो कुरा सुन्नु पर्दछ। हरेक दिन बच्चाको कुरा सुन्दा उनीहरुलाई विवाह गरेकोमा पछुतो हुने गर्दछ।,,,भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला,,,